Edith Cowan University - Higher Education an-tany hafa any Aostralia
fanafohezan-teny : ECU
Aza adino ny discuss Edith Cowan University
T dia amin'ny fahafinaretana lehibe izay miarahaba anareo tonga soa Edith Cowan University.
Ao amin'ny ECU isika dia tarihin'ny ny soatoavina ny tsy fivadihana, fanajana, misaina tsara fanadihadiana sy manokana. Ny mifantoka amin'ny fampianarana sy ny fikarohana no aingam-panahy sy ny fiaraha-miasa andraikitra amin'ireo izay ao amin'ny fiaraha-monina maro izahay dia naorina mba hanompo.
Fikarohana ao amin'ny ECU Maneho ny fahalalana ary manatsara ny kalitaon'ny fiainana ho an'ny Aostralianina sy ny olona manerana izao tontolo izao. Laharam-pahamehana ny fikarohana mifantoka amin'ny famahana ny tena olana manerana izao tontolo izao ara-tsosialy, ara-toekarena, ara-batana sy ny tontolo iainana sehatra.
hampitoerina amin'ny 1991, ECU dia nitombo haingana an-toetra tsara anjerimanontolo amin'ny mpianatra iraisam-pirenena fantatra afa-po sy ny fikarohana.
Mpianatra sy nahazo diplaoma tao ECU no anivon'ireo ny tsara indrindra eran-tany, maro po andraikitra lehibe eo amin'ny fiaraha-monina. Ny zava-bita miavaka no fantatra nanerana an'i Aostralia sy ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny loka, atolotry, vatsim-pianarana sy ny loka.
ECU no nanao ny nihalehibe handray anjara sy ny fandravana ireo sakana izay mametra ny fidirana amin'ny fanabeazana, ary dia manohy ny asa amin'ny hatsarana sy ny fampandrosoana ny hafa teny Pathways to fianarana ambony.
Isika oniversite izay sarobidy fahasamihafana ary izany no ohatra amin'ny alalan'ny andiana miaramila mpianatra kolontsaina maro isan-karazany naharitra mandrakizay. Koa izahay manohana fitovian-jo sy ECU no mandroso izany amin'ny alalan'ny fanoloran-tena ny maha-mpikambana ao amin'ny Athena SWAN Satan'ny any Aostralia.
Manentana anareo aho mba hahalala bebe kokoa momba ny fomba ECU afaka manampy anao hanatratra ny hery anaty.
Profesora Steve Chapman
Edith Cowan University (ECU) manome ny tsara indrindra ho an'ny olona ny fianarana tontolo iainana izay te-hahatratra ny hery anaty.
Any in Western Australia, ny orinasa-danja ny fampianarana sy ny fikarohana, manohana fianarana tontolo iainana sy ny foto-drafitrasa nahazo loka ECU hahafahan'ny mpianatra mba manao zavatra bebe kokoa noho ny velona eto amin'ity tontolo ity - dia miroborobo ao.
hampitoerina amin'ny 1991, ECU naka ny fahafahana reshape ny fomba fianarana ambony dia hatolotra ao amin'ny toeram-pianarana miavaka sy manentana ny fanahy tontolo iainana.
ECU antokony dia mandroso amin'ny fifampidinihana miaraka amin'ny orinasa, sy ny fampianarana mpiasa manana traikefa be dia be orinasa sy ny tambajotra. Izany no mahatonga ireo mpianatra ECU afaka manantena fametrahana fahafahana, fieldwork, practicums sy ny tambajotra ao anatin'ny fisehoan-javatra ny fianarana.
Izany fomba efa valisoa dimy-kintana naoty hampianarana kalitao tato anatin'ny fito taona, miaraka amin'ireo naoty ambony foana ho afa-po sy nahazo diplaoma levitra fahaiza-manao, araka ny tatitra ao amin'ny Tsara Anjerimanontolo Guide.
ECU ny izao tontolo izao-kilasy fikarohana miezaka ny hanao fiovana ho amin'ny fiaraha-monina any Aostralia Andrefana ary any an-dafin'i. ECU Mifantoka amin'ny miasa amin'ny fiaraha-monina, raharaham-barotra sy ny governemanta fikambanana mba hamaha ny olana eran-tena-.
Ny University no atao hoe taorian'ny Edith Dirksey Cowan, vehivavy voalohany voafidy ho any Aostralia Parlemanta. Ny fiainany dia natokana ho an'ny finoana fa ny fanabeazana no fanalahidy ho fitomboana, fiovana sy ny fivoarana eo amin'ny fiaraha-monina.
Ny ohatra mampahafantatra ny soatoavina ECU rehefa ny avonavona ny tenantsika amin'ny fampandrosoana mahavita nahazo diplaoma izay hahatonga ny anjara sy mamokatra fiainana ao amin'ny fiaraha-monina izay mipetraka sy miasa izy ireo.
ECU manana mihoatra noho 27,000 undergraduate ary nahazo diplaoma teny mpianatra. Isan-taona ihany koa izahay handray ny 4,000 mpianatra iraisam-pirenena, niandoha avy amin'ireo mahery 100 firenena.
From 2016, ny valo no miaraka hamonjy sekoly mihoatra noho 300 taranja samihafa manerana Fahasalamana & Medical Sciences, Engineering, fanabeazana, Arts & Humanities, Business & lalàna, Nursing & Midwifery, Siansa sy ny tandrefana Aostralia Akademia Nanao Arts.
Courses ireny aterina eo amin'ny telo campus - Joondalup sy Mount Lawley amin'ny tanan-dehibe Perth sy ny South West Campus amin'ny Bunbury, 200km south ny renivohitra. ECU ihany koa ny manolotra feno tariny an-tserasera fianarana safidy.
ECU incorporates izao tontolo izao-malaza Tandrefana Aostraliana Akademia Nanao Arts, ny tranainy sy malaza indrindra Sekolin'ny Education in Western Australia, ny lehibe indrindra amin'ny fandaharana Nursing ny Fanjakana, ary Kurongkurl Katitjin, ny Centre for Australian Teratany Fanabeazana sy ny Fikarohana.
Sekoly Fanabeazana Broad disciplines: Teacher education for Early Childhood, Primary and Secondary schools
Sekolin'ny Engineering Broad disciplines: Full range of Engineering specialisations
School of Medical and Health Sciences Broad disciplines: Fanatanjahan-tena sy ny Siansa Health, siansa ara-pitsaboana, Biomedical Science, Speech Pathology and Paramedicine
Sekolin'ny Nursing sy Midwifery Broad disciplines: Nursing sy Midwifery
Sekolin'ny Science Broad disciplines: Biology and Environmental Sciences, Matematika, Fizìka, mpikaroka, Computing and Security Sciences
Western Australian College of Advanced Education (WACAE) was granted university status on 1 Janoary 1991 and changed its name to Edith Cowan University.
In 1991, the university purchased the house that Cowan, her husband and family resided in for approximately 20 taona. The house was reconstructed on the university’s Joondalup Campus with the assistance of the West Coast College of TAFE, the reconstructed house was opened in 1997. Edith Cowan House, Building 20 on the university’s Joondalup Campus, currently plays host to the Peter Cowan Writer’s Centre.
Ianao ve mila discuss Edith Cowan University ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Photos: Edith Cowan University ofisialy Facebook